Nhicha, ọgwụgwọ ma ọ bụ disinfection bụ usoro ihe mgbagwoju anya nke enwere ike ịrụ, dịka ọmụmaatụ, iji kemịkal.
Ọzọkwa, ojiji nke UV ikanam oriọna na-eme ka ngwaahịa Acuva bụrụ ezigbo ihe ngwọta ọ bụghị naanị maka ụlọ na ọfịs, kamakwa ọ dị mma maka ịsacha mmiri na ụgbọ mmiri ma ọ bụ na moto.
Mmiri naanị na-enweta disinfection, n'ihi nke a A na-ewepụ 99,9999% nke nje, nje na ọrịa ndị ọzọ niilenke ahụ nwere ike ibute nsogbu ahụike, nke ga-adịkwa mfe isi na nzacha mmiri ọ bụla.
Acuva Arrow 5 UV-LED mmiri mmiri
Ọrụ ndụ nke 10 + afọ
Acuva Arrow 5 UV-Ikanam
Acuva na-enye ngwaahịa etinyere n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ojiji ọ bụla. Site na mbara igwe UV-LED dị ọcha, ị nwere ike ịhọrọ ngwaọrụ, dịka na ikike nke 5 lita kwa nkeji na ndụ ọrụ nke 900 lita.
Acuva Eco NX-Silver UV-Ikanam na mgbata
Kwụsị ichegbu onwe gị banyere mmiri mmiri mmiri gafere na ụgbọ mmiri gị. Jiri mmiri na-adịghị ọcha ma hichaa ya tupu ị drinkingụ ihe ọ usingụ usingụ site na iji usoro disinfection Acuva UV-LED. Kporie mmiri mmiri na-adịghị ọcha na ụgbọ mmiri gị na RV ma ọ bụ ezumike n'ụlọ na-enweghị mmiri mmiri.
Họrọ usoro nhicha mmiri Acuva UV-LED ị na-ahọrọ ngwaahịa kachasị mma nke na-enye mmiri dị ọcha, nke na-adịghị ọcha maka ụlọ gị, ụgbọ mmiri ma ọ bụ motohome.